ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေး နဲ့ မိမိုက်နေပြီး ရင်ဖိုချင် စရာကောင်းလွန်း နေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် – Let Pan Daily
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ…ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ၊ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေမှာ မကြာခဏမြင်တွေ့နေရတဲ့သူမကတော့ အနုပညာလောကမှာတစ်စထက်တစ်စ နာမည်ကျော်ကြား ရေပန်းစားလာတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ဘော်ဒီအလှတွေနဲ့လည်း ပုရိသပရိသတ်တို့ရင်ကိုဖမ်းစားထားတဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ဖူးပွင့်သခင်က ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်တွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလန်းစားဖက်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပိုစ့်ပေးဓါတ်ဖမ်းနေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန် အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ပုံလေးတွေတိုင်းက ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးလို အလှပိုနေတာဖြစ်ပြီး ရင်ဖိုချင်စရာကောင်းလွန်းနေတာဖြစ်လို့ ကြည့်မိသူတိုင်း အကြိုက်တွေ့မိစေမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်. ။ ဒါ့အပြင် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်….. ။
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ…ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဖူးပြင့္သခင္ကေတာ့ ပုရိသပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြ၊ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ကူးေရးေတြမွာ မၾကာခဏျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့သူမကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာတစ္စထက္တစ္စ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ေရပန္းစားလာတဲ့သူေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စား ေကာက္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ စြဲမက္ဖြယ္ေဘာ္ဒီအလွေတြနဲ႔လည္း ပုရိသပရိသတ္တို႔ရင္ကိုဖမ္းစားထားတဲ့သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ဖူးပြင့္သခင္က ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ အမိုက္စားပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလန္းစားဖက္ရွင္ေလးျဖစ္တဲ့ အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံေလးနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ ပိုစ့္ေပးဓါတ္ဖမ္းေနတဲ့ အလန္းစားပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာျဖစ္လို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈေစႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ဖူးပြင့္သခင္ရဲ႕ ပုံေလးေတြတိုင္းက ကိုရီးယား မင္းသမီးေလးလို အလွပိုေနတာျဖစ္ၿပီး ရင္ဖိုခ်င္စရာေကာင္းလြန္းေနတာျဖစ္လို႔ ၾကည့္မိသူတိုင္း အႀကိဳက္ေတြ႕မိေစမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ…ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း ဖူးပြင့္သခင္ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး အသည္းေလးေတြေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္. ။ ဒါ့အျပင္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြက အားေပးလိုက္ၾကပါဦးေနာ္….. ။
ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံတွေ ကို တင်ပေးတက် တဲ့ ဆွေဇင်ထက် ရဲ့ အမိုက်စားပုံများ
ထိမိလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်တွေ တဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း လန်းလွန်း နေတဲ့ စုမြတ်ဖူး